मनोज गजुरेलको कटाक्ष: काठमाडौंको मुटुमा ‘र’को अस्पताल, मोदीले उद्घाटन गर्ने संभावना !
‘नेपालका अस्पतालहरुमा ‘र’ को लगानी छ ।’ यो कुरा शुरुमा त हामीले पनि पत्याएनौं तर तब अवाक भयौं जब ‘र’ले काठमाडौंमै अस्पताल चलाएको प्रमाण भेट्यौं । ‘स्वस्थ नेपालका लागि एक्टर-एक्टिभिस्ट क्याम्पेन’को टोली हिजो साँझ ८ बजे वीर अस्पाताल हिँडेको थियो । खुलामञ्चमा गाडी पार्क गरेर अगाडि बढ्दै गर्दा कुमार कट्टेल ‘जिग्री’ले भने- ‘दाजु, यो अस्पताल त ‘र’ले पो चलाएको रहेछ !’
सबैले वीर अस्पतालको छत तिर नजर लगायौ । त्यहाँ स्पष्ट रुपमा ‘र’ अस्पताल लेखेको बिजुली बोर्ड देखिन्थ्यो । अभियन्ता अर्जुन धरेलले भने- ‘प्राकृतिक सम्पदामात्र हैन, भारतले त स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हात हाल्न थाल्यो बा !’ सिस्नुपानी महासचिव टंकराज आचार्यले थपे- ‘हातमात्रै हैन, मौका पायो भने सर्वाङ्ग हाल्न बेर छैन!’
पाँडे बोले- ‘नरेन्द्र मोदीको भ्रमण भरिलाई मात्र बनाएको होला !’
धुर्मुसले थपे- ‘यो ‘र’ त हामीभन्दा’नि फास्ट निस्कियो, एकैरातमा कति ठूलो निर्माण !’
‘त्यसरी झरेको एउटा 'वी' त टाँस्न नसक्नेले भाँचिएको हड्डी कसरी जोड्छ यहाँ ?’ ‘खै हजुर, अहिलेसम्म ठोकठाक पारेर जोडिंदै आएको छ,’ उनले आश्वस्त पार्न खोजे, ‘तपाईं ढुक्क हुनोस्, यो र अस्पताल हैन, वीर अस्पताल नै हो ।’
मलाई भने पटक्कै विश्वास लागेन, त्यो वीर अस्पताल नै हो । किनभने त्यहाँ उडि सकेको रंग, चर्किएका सिसा, उप्किएका वाल, जलेका चिम, कट्कटिएका कुर्सी, भत्किएको भऱ्याङ, अलपत्र बिरामी, अव्यवस्थित कुरुवा धेरै भेटिए । वीर भनिएको अस्पताल स्वयम् शक्तिहिन देखिन्थ्यो ।
अलि पल्तिर भेटिए ‘खेम्स क्लिनिङका’ खेम शर्मा जो अस्ट्रेलियाबाट आएर स्वस्थ नेपालको अभियान चलाइरहेका छन् । धुमुर्स–सुन्तली लगायत हाम्रो यो अभियानमा सहकार्य भइरहेको छ । खेमले भने, ‘कम्तिमा एक महिनामा कुरुप अस्पतालले रुप फेर्नेछ ।’
मैले भनें, ‘हामीले जति सफा गरेपनि ‘र’ लाई नहटाइकन सरकारी अस्पताल सुध्रिदैनन ।’
खेमजीजीले सोधे, ‘कस्तो र ?’
मैले भनें, ‘अब्यवस्थित शह–र, दुर्गन्धित फोहो–र, लामखुट्टेको लह–र, पान गुट्खाको कभ–र , कामचोरका डाक्ट–र, सिकारुको ड–र, प्राक्टिसेको रह–र, नर्सहरुको ब्यवहा–र, कर्मचारीको कह–र, ठगहरुको ठह–र, अखाद्य आहा–र, बिरामीलाई दुव्र्यवहा–र !
हास्यव्यंग्यकर्मी गजुरेल गजुरीयल डटकममा नियमित ब्लग लेख्छन्।